कुबेतद्वारा सबै बिदेशी कामदारको तलब बृद्धि, हेर्नुस कति पुग्यो ? - Samaj Patra
कुबेतले घरेलु कामदार (हाउसमेड)को न्युनतम तलबमा बृद्धि गरेको छ । उसले ४० कुबेती दीनारबाट ७० कुबेती डिनार पुर्‍याएको हो ।
श्रोत देशहरुले हाउसमेडको तलब तथा सुरक्षाको विषयप्रति चिन्ता जनाउँदै पठाउन रोक लगाइरहेको अबस्थामा कुबेत सरकारले नयाँ तलबमान तोकेको हो ।
श्रोत देशहरुले हाउसमेडको तलब तथा सुरक्षाको विषयप्रति चिन्ता जनाउँदै पठाउन रोक लगाइरहेको अबस्थामा कुबेत सरकारले नयाँ तलबमान तोकेको हो । आन्तरिक मन्त्री शेख मोहमद खालिद अल सबाहले नयाँ तलबमान सार्बजनिक गरेका थिए ।
कुबेतस्थित नेपाली दुताबासले यसअघि नै नेपाली घरेलु कामदारको न्युनतम तलब ६० डिनार (२०० डलर) दिने भएपछि मात्रै कामदार आपूर्ति गर्न स्वीकृति दिने गरेको थियो । नेपालले कुबेतमा हाउसमेड पठाउन दुई बर्षदेखि नै बन्द गरेको भएपनि तेश्रो बाटो हुदै तस्करी हुने गरेको छ ।
नेपालले संस्थागत रुपमा हाउसमेड पठाउनको लागि नयाँ निर्देशिका तय गरेको छ । जसमा कुबेतको लागि ३ सय अमेरिकी डलर अर्थात झन्डै ९० केडी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘गन्तब्य देशले जति तोक्छ ।
त्यति नै लागु हुन्छ । कि हामीले हाम्रा कामदारलाई यति भन्दा नदिने हो भने पठाउँदैन भन्न सक्नुपर्छ,’ कुबेतका लागि नेपाली राजदुत यज्ञबहादुर हमालले कान्तिपुरलाई भने, ‘होइन भने कुबेतसँग द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नु पर्छ ।’
नेपालले हाउसमेड सम्बन्धी दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गरेपछि मात्रै घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने कुबेतलाई जानकारी दिएको छ । त्यसको लागि कुबेत र नेपालबीच श्रम सम्झौताको आन्तरीक तयारीमा जुटेको छ ।
Previous Article Qatar Worldcup को टिकट बिक्री पुनः खुल्ला, कतारका नेपालीलाई छुट ?
Next Article साउदीका नेपालीहरु भन्छन् साउदीमा कम्पनी परिवर्तन गर्न सजिलो छ, प्रक्रिया सहित